ပန်းဝါ က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း နဲ့ရုပ်ပွား တော် တွေ ကို မွတ်ဆလင် တွေ ဖျက်ဆီးမှု ကို ကောဇ့်ဘဇား သတင်းစာမှာ ဖော်ပြ | Freedom News Group
ပန်းဝါ က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း နဲ့ရုပ်ပွား တော် တွေ ကို မွတ်ဆလင် တွေ ဖျက်ဆီးမှု ကို ကောဇ့်ဘဇား သတင်းစာမှာ ဖော်ပြ
by FNG on October 9, 2012	ဘင်္ဂလား ဒေရှ် နိုင်ငံ ၊ ကောဇ့် ဘဇား ခရိုင် ၊ ပန်းဝါ မြို့မှာ ဒေါသ ထွက် နေတဲ့ မွတ်ဆလင် လူ
အုပ် ကြီးက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၊ သိမ် ၂ ခု နဲ့လူနေ အိမ် ခြေ ၂၀ ကျော် ကို
တိုက် ခိုက် ဖျက် ဆီး စဉ်က ဓာတ် ပုံ များ ကို ကော့ဘဇား သတင်းဌာန က ခု လို ဖော်ပြထား ပါတယ်။
ပန်းဝါ က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း နဲ့ရုပ်ပွား တော် တွေ ကို မွတ်ဆလင် တွေ မီးရှို့ (ယခင်ဖော်ပြ ပြီးခဲ့ သတင်း) ২৯ সেপ্টেম্বর সেই কালো রাতে লুটপাটে ব্যস্ত কিছু দুষ্কৃতিকারীর ছবি আমাদের কাছে এসেছে। এদের চেহারা কারো কাছে অপরিচিত নয় । শান্তিকামী কক্সবাজারবাসীর কাম্য, দলীয় দৃষ্টি কোন থেকে নয় ,এদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে কঠিনতর শাস্তি দেয়া হোক। এদের কে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনার প্রকৃত মদদদাতাদের বের করা খুব বেশী কঠিন হবে না বলে মনে করছেন জনসাধারণ।সত্য উদঘাটনে সহায়ক হবে মনে করে আমরা ফেসবুক থেকে পাওয়া ছবিগুলো প্রকাশ করলাম -সিবিএন
রামুর ‘শাদা ছিং’-এর সম্মুখভাগের বেদিতে জনৈক হামলাকারীর উল্লাস
রামুর ‘শাদা ছিং’ ভাঙচুর করছে আক্রমণকারীরা
রামুর ‘শাদা ছিং’-এর অভ্যন্তরে হামলাকারীরা
দানবাক্স লুটপাট করছে হামলাকারীরা
রামুর ‘শাদা ছিং’-এর অভ্যন্তরে বুদ্ধমূর্তি ভাঙতে উদ্যত জনৈক আক্রমণকারী
রামুর ‘শাদা ছিং’-এর অভ্যন্তরে ইট দিয়ে বুদ্ধমূর্তি ভাঙতে উদ্যত জনৈক আক্রমণকারী
From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← ဦးသိန်းစိန် ၏ တောင်ကိုရီးယားခရီး စဉ် မှာ တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ က နွေးထွေးစွာ ကြိုဆို
ပြည်သူက လက်မခံ သော် OIC ရုံးဖွင့်မည် →
ဒီလိုတွေဖြစ်နေအောင်လုပ်တာ. ဘယ်သူတွေကစပြီး မဟုတ်မမှန်တာတွေကိုပြောခဲ့တာလဲ. လူမျိုးအချင်းချင်းသွေးထိုးနေတဲ့ လူတွေသာငရဲရောက်မှာ.
October 23, 2012	ထက်ကိုး	#
October 13, 2012	su	#
လူတွေ မသေကြဘူးလား။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို သူတို့ မျိုးတုံးအောင် လုပ်ခဲ့မယ် ထင်တယ်နော်။သတင်းရရင် အဲဒါလေး သိ ချင်ပါတယ်။
October 13, 2012	ချိန်တန်ပီ	#
ဗုဒ်ဓဘာသာတွေ ဖြစ်ချင်တာထက် တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ကို မမြင်နိုင်ကြသေးပါလား … ဗုဒ်ဓဘာသာအတွက် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အနှုတ်လက္ခဏာကို ပြနေပါလား … အခုအချိန်အထိ ခန္တီစတရားကို လက်ကိုင်ထားတုန်းပါလား … ဗုဒ်ဓဘာသာအတွက် တဖြည်းဖြည်း ရင်လေးလာပြီ …
October 11, 2012	့honey	#
October 9, 2012	Myanmar People	#
သူတို့ အနာဂတ် ဘ၀ အတွက် ရင်လေးစရာပဲ . .
October 9, 2012	Joli	#
ငရဲ ကို မကြောက်သောသူများ။
October 9, 2012	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,523,646 hits
Thailand will hold elections by February 2; Yingluck may not be her party's choice to run, government spokesman says.2hours ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishMyanmar's president asks Philippines for more aidMyanmar to allow foreign banks to begin some operations next yearLuxury river cruise to sail Myanmar waters next yearMyanmar refugees face land challenges on returnMyanmar gives relief to CebuMyanmar president visits northern CebuPH flounders in wushu; Myanmar leadsUndergrads return to crumbling Myanmar universityWant Burma info in your inbox each morning?